In ka badan Saddex bilood oo aan laga badin… Taxane cajiibka ah uu Zidane ka sameeyay Real Madrid – Gool FM
Dajiye January 19, 2020
(Madrid) 19 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa halkeeda ka sii waday taxanaheeda guuldarro la’aanta ah iyadoo uu hoggaaminayo macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Real Madrid ayaa xalay guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Sevilla garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 20-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Los Blancos ayaa hadda kali ku noqotay hoggaaminta horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxayna Barcelona ka sareysaa saddex dhibcood, kahor kulanka ay caawa Barca ku soo dhaweyn doonto kooxda Granada garoonka Camp Nou.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu xaqiijiyay in Real Madrid aysan wax guuldarro ah la kulmin 91 maalmood ee lasoo dhaafay, gaar ahaan tan iyo 19-ka bishii Oktoobar 2019, kaddib guuldarradii kaga soo gaartay Real Mallorca horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Tan iyo xilligaas Real Madrid lagama badinin 17-kii kulan ugu dambeeyey oo ay ka ciyaartay dhamaan tartamada kala duwan.
Kaddib guuldarradii Real Mallorca ee La Liga, Real Madrid waxay ciyaartay 11 kulan ee horyaalka ah, waxay guul gaartay 7 kulan, waxay bar-bardhac gashay 4 kulan kale, iyadoo ka soo gudubtay kulamo adag oo ay ku soo ciyaartay banaanka sida Valencia oo ay kula soo ciyaartay garoonka Mestalla, iyo Barcelona oo ay ku booqatay Camp Nou.